Xeebta Ski Resort ee Çamba is Plateau ayaa Degdeg u Socota | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka BanaadirCiidamada 52Cimilada Xiisaha Kubadda Xardhan ee Cambaşı si dhaqso ah ayey u socotaa
19 / 05 / 2014 Ciidamada 52, GUUD, TELPHER
Xarunta Partyambaşı Plateau Ski Resort waxay si dhaqso ah u dhaqaaqaysaa: Kuxigeenka AK Party Army iyo Golaha Iskaashiga Dhaqaalaha ee Black Sea (PABSEC) Madaxweynaha Kooxda İhsan Şener, degmada Kabadüz ee Ordu, dhismaha garoon barafka iyo shaqooyinka wadada ayaa baaraya goobta dhismaha.
Sener wuxuu soo dhoweeyay Duqa magaalada Kabaduz Yener Kaya, Ordu-Çambaşı plateau shaqada dhismaha wadada ayagoo baaraya goobta, waxay heleen macluumaad kusaabsan shaqada. Helitaanka macluumaadka ku saabsan shaqada skater Sener, ayaa sheegay in dhammaan tasiilaadka ay abaabushay dowladda si loo dhammeeyo labada maalgashi. Şener wuxuu yidhi, X Wadada kiiloomitir 10 ee u dhaxaysa Kabadüz iyo Çambaşı, waa tiir muhiim ah mashruuca wadada Ordu-Çambaşı, si xawli ah ayuu usocdaa. Waxaan rajeyneynaa inaan dhameystirno wadadan ilaa dhamaadka 2015. Meeshani waxay leedahay awood muhiim u ah dalxiiska. Marka laga hadlayo kaabayaasha dhaqaalaha, dhibaatada si weyn ayaa loo xallin doonaa. Wadadan, maalgashiyada dawlada iyo kuwa gaarka loo leeyahay labadaba waa la sameeyay. ”
Isagoo caddeeyay in isteetarka barafka ugu dhow ee badda laga dhisay Ordu, ayuu yidhi Şener, wuxuu yiri Dhis aad u ballaaran oo baraf ah ayaa laga dhisi doonaa Ordu xarun soo jiidasho leh. Waxaan rajeynayaa inaan halkaan ku fariisan doono sanadka soo socda waxaanan ugu adeegi doonaa dalxiisayaasha maxalliga ah iyo kuwa ajnabiga ah laba nidaam oo kaladuwan oo ah qalabka baabuurta. Malaha barafka ugu dhow ee badda ku tega. Laga soo bilaabo gegada diyaaradaha ee la dhisay ilaa badda, qof walba wuxuu si fudud ku gaari karaa iskeelka barafka ee u dhow badda. Waxaan halkaan la fariisan doonaa asxaabteena kale ee ciidanka ah iyo martidayada ka imaaneysa dibedda xilliga qaboobaha ”.
Duqa magaalada Kabadüz Yener Kaya ayaa yidhi, imiz Mr. Kuxigeenka wuxuu arkay horumarada ka socda wadada weyn, xarunta barafka iyo hoteellada ku yaal gobolkayaga. Iyada oo taageero laga helayo kuxigeenkeenna, waxaan dardargelin doonnaa maalgashiga aaggan, waxaanan ku dhammeyn doonnaa maalgashiga deegaannadaas isla waqtigaas dhammaystirka dhismaha garoonka diyaaradaha, ballaarinta aagagga dalxiiska waxaanan sare u qaadeynaa gobolkeenna oo qayb weyn ka qaadan doonta gobolkeenna. Hawlaha kaabayaasha ayaa socda. ”
Dhismaha Xarunta Dhismaha Xarunta Dhexe ee Dhismaha Khadadka
Habka Badbaadada Badda-Mediterranean
nidaamka baabuurta telefishanka
Waxay ku qosleen dadka reer Istanbul berrito ilaa suuqa iyo Seyrantepe subway 4 bishii
Midowga Energy ee Nidaamyada Tareenka ee Bariga Dhexe